Halista cudurada wadnaha oo siyaabo kale oo yaab leh lagu qaadi karo… – Hagaag.com
Halista cudurada wadnaha oo siyaabo kale oo yaab leh lagu qaadi karo…
Inkasta oo dad badani ay raacaan hababka sida cayaaraha jimicsiga, cunaan cunto caafimaad leh oo aan sigaar cabin, hadana weli waxay halis u yihiin cudurada wadnaha sababo aan marnaba maskaxda gelin.
Khubaro ku Takhasustey cudurada wadnaha ee Maraykanka ayaa qeexay sababaha cajiibka ah ee cudurada wadnaha, oo lagu daabacay Readers Digest, wax ka baro:
Qaangaarka hore ee haweenka
Sida laga soo xigtay khubarada ku takhasustay cudurada wadnaha ee Maraykanka, ayaa sheegay gabdhaha ku qaangaara iyagoo da’doodu ka hooseyso 12 jir ayaa waxay kordhin kartaa khatarta cudurka wadnaha 10% marka loo barbardhigo kuwa dambe.
Daawooyinka loo isticmaalo in la isku caateeyo
Dr. Amber Khanna oo ka tirsan Isbitaalka jaamacadda Colorado ee la hadashay website Readers Digest ayaa xaqiijisay in daawooyinkan aanan kaa caawinin dhimista miisaanka sida dadka badankiisa ay rumeysan yihiin, laakin waa mid wax dhibaateysa xataa waxay keeni kartaa dhimasho, waxaa ku jira waxyaabo saameyn ay ku dhiiri geliso jirka in uu kordhiyo cadaadiska dhiigga, waxay kordhisaa garaaca wadnaha haddii la qaato muddo dheer.
Daraasad lagu soo saaray journalka New England Journal of medicine, ayaa lagu xaqiijiyey hargabka daran in laga yaabo inuu saameyn ku yeesho wadnaha xataa markay ka soo wareegto sanad kadib hargabka, waxaa jira noocyo bakteeriya iyo fayruus oo laga yaabo in ay u gudbaan wadnaha hargabka dartiisa oo loo dhiman karo, haddii bukaanka hargabka uu dareemo inay neefta ku dhegeyso ama xanuun dhinaca xabadka hayo waqtiga hurdada, waa inuu si deg deg u doonto dhakhtar si loo hubiyo caafimadka wadnahiisa.
Keli ahaanta ama wehel la’aanta
Go’doonka iyo is dhex gal la’aanta dadka kale ay kordhiyaan halista cudurada wadnaha 30% sida laga soo xigtay American heart journal. waxaa lagu talinayaa inuu qofka la xiriiro dad kale sida qaraabada iyo saaxiibada.
Maaha oo keliya in ay kordhiso khatarta wadne xanuunka, laakin waxaa dhici karta in ay ku dili karto. Tani waxaa xaqiijisay daraasad soo saartay American college of Heart diseases. laakin weli ma cada xiriirka ka dhaxeeya murugada iyo dhimashada cudurada wadnaha, laakin daraasada ayaa sheegeysa bukaanka murugada qaba in ay kor u kacaan cholestrol-ka iyo dhiiga kuwaasi oo labadooduba lala xiriiriyo cudurada wadnaha, sida lagu sheegay Readers Digest.
Xusuusta xanuunka leh
Daraasad lagu daabacay wargeyska Circulation wuxuu xaqiijinayaa in xusuusta xanuunka badan leh uu kordhiyo heerka cudurrada wadnaha sida stroke ama dhinac ku qalalo ama wadne xanuun. Waxa la ogaaday haweenka soo gaaray ugu yaraan saddex dhacdooyin xanuun badan caruurnimadooda, sida galmo ama shil xanuun badan ama ahaayeen dhibbanayaal falal rabshado ay u badan tahay in ay korodho halista cudurka wadnaha waqti hore ee cimrigeeda.